အပိုငျး ၂၂ - BookCubicle
သူ့ပဈမှတျကိုထုနှကျဖို့အတှကျ အရမျးကိုကပျလှနျးနသေညျကိုသိလိုကျရတဲ့အခါ သူနောငျတသေးသေးလေးရလိုကျသညျ။ သို့ပမေယျ့ သူခကျြခငျြးပဲကြောဘကျကိုသှားလိုကျပွီး ဂငျြခနျ့ကိုကနျလိုကျသညျ။
လြှပျတပွကျအခြိနျမှာပဲ ဂငျြခနျြဘာမှပွနျမလုပျဘဲ ၁၀ကှကျအကွောပေးခွငျးဟာ ပွီးသှားခဲ့ပါပွီ။ လှုပျရှုားမှုတိုငျးကို ကဒီလြှံဟာအရှောငျပဲခံနရေလတေယျ။ ဒါပမေယျ့ ကွညျ့ရှုနတေဲ့သူတှအေတှကျမှာတော့ ဂငျြခနျြဟာ သူ့အရပွေားနှငျ့ထိခါနီးမှသာ ရှောငျတိမျးသညျကိုတှေ့၇ပတေယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ကွညျ့နကွေရငျး သူတို့တှမှော ခြှေးစေးတှပေငျပြံလို့ပါပဲ။ အထူးသဖွငျ့ ခငျြးယနျဟူ… သူ့မှာ ဂငျြခနျြ့အတှကျ ရငျတထိတျထိတျဖွဈနရေတယျ။
ကဒိလြှံရဲ့တိုကျခိုကျမှုတှကေ အတျောမွနျပမေယျ့ ၁၀ကွိမျလုံးမှာ သူဂငျြခနျြရဲ့ အင်ျကြီလေးကိုတောငျထိအောငျမတိုကျနိုငျခဲ့ဘူး။ ကဒီလြှံမယုံကွညျနိုငျနသေလို ဒေါသကွောငျ့မကျြနှာတှပေါ နီမွနျးလာလတေယျ။
နောကျဆုံးမှာတော့ ကဒီလြှံရဲ့လကျသီးကိုရငျဆိုငျဖို့ ဂငျြခနျြဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။
“၁၀ကွိမျပွီးသှားပွီ။ အခု ငါ့အလညျ့ပဲ”
သူ့ခွထေောကျမှာသုံးထားသညျ့အမွနျနှုနျးမှာ အလှနျကိုပွငျးလှသညျမို့ ကဒီလြှံမှာရှောငျဖို့အခှငျ့အရေး မရလိုကျလဘေူး။ သို့ပမေယျ့ ကနျခကျြကိုကာဖို့ သူ့လကျတှကေိုအသုံးပွုလိုကျပမေယျ့ ဂငျြခနျြ့ခွထေောကျမှာ လကျတှကေိုဖွတျ၍ ကဒီလြှံရဲ့ရငျဘတျဆီရောကျလာလတေယျ။
“ဒုံး…. ဒုံး…. ဒုံး”
ဂငျြခနျြရဲ့ခွထေောကျက သုံးထားတဲ့အားက ကဒီလြှံကိုနောကျကိုအရှိနျဖွငျ့ အတျောလှငျ့သှားစသေညျ။ ကဒီလြှံမှာ ဂငျြခနျြကို မယုံနိုငျစှာသာ ရပျကွညျ့နဖွေဈသညျ။ ဂငျြခနျြက သူတျောစငျအဆငျ့၈ပဲရှိသေးတာတောငျမှ သူ့ခှနျအားက မြှျောလငျ့ထားတာထကျ အတျော့ကိုမြားနသေေးတယျ။ အဲ့ဒိခှနျအားကို ကဒီလြှံတောငျမှ တောငျ့ခံဖို့ရာမဖွဈနိုငျလဘေူး။
နောကျဆုံးသူတို့ယှဉျပွိုငျခဲ့စဉျက ကဒီလြှံအတှကျ ဂငျြခနျြ့ကိုပွနျတိုကျဖို့ အခှငျ့အရေးမရခဲ့ဘူး။ ထို့ကွောငျ့ သူ ဂငျြခနျြ့ခှနျအားအစဈအမှနျကို နားမလညျခဲ့ဘူး။ ယခုတိုကျပှဲမှသာ ဂငျြခနျြဟာ သူ့ထကျခှနျအားအရာမှာ မြားစှာသာသညျ့အကွောငျး နားလညျလိုကျရလတေယျ။
ဖွဈနိုငျတာကတော့ ဂငျြခနျြက ပွိုငျပှဲကိုမွနျမွနျအဆုံးသတျခငျြနပေုံပါပဲ။ သူက ကဒီလြှံကိုခုခံဖို့ရာအခြိနျမပေးတော့ဘဲ လကျဝါးတဈခကျြဟာ ကဒီလြှံ့ရငျဘတျဆီရောကျလာပွနျတယျ။
ကဒီလြှံမတျမတျရပျနိုငျဖို့မနညျးကွိုးစားလိုကျရသညျ။ သူ့မကျြနှာကား အတျောအရုပျဆိုးနလေပွေီ။ ဂငျြခနျြ့ခေါငျးကိုရှယျထားတဲ့လကျသီးဟာ ဂငျြခနျြရဲ့လကျသီးကိုကာကှယျရငျးသာ အသုံးပွုလိုကျရလတေယျ။
ဂငျြခနျြတဈခကျြရယျလိုကျပွီး ကဒီလြှံကိုပခုံးမှကိုငျကာ ဆှဲယူလိုကျတယျ။ထိုသူ့ခန်ဓာအား နောကျလကျတဈဖကျဖွငျ့ထပျကိုငျကာ အားနညျးနညျးထညျ့ပွီး အဝေးကို ပြံသနျးစလေိုကျသညျ။
သူ့အရငျဘ၀မှာတုနျးကဖွငျ့ မှနျဂိုတှထေံမှာ ပညာသငျခဲ့ဖူးပါ၏။ သို့ပကွေောငျ့လညျး နပနျးသတျခွငျးလိုပညာရပျမြိုးတှငျ သူအတျော တျောပါ၏။ သူအကွိမျမြားစှာလကေ့ငျြ့ခဲ့သညျမို့ အတှအေ့ကွုံတှမှောလညျး အတျောပငျမြားလသေညျ။
အကွောငျးတှကေ သူ့မှတျဥာဏျမှာခြိုးကပျနပွေီဆိုပမေယျ့ သူကားဓားရေးပွရုံသကျသကျထကျ မြားစှာအသုံးဝငျသညျ့ တိုကျခိုကျရေးပညာရေးတှကေိုလညျး လလေ့ာထားခဲ့သညျ။ သူ့အနနှေငျ့ တဈစုံတဈခုကိုမမှတျမိလြှငျတောငျမှ အခွားတဈခုကိုတော့ဖွငျ့ သူ့မှတျဥာဏျကညှဈထုတျပေးပါလိမျ့မညျတညျ့..
ကဒီလြှံ၏ခန်ဓာမူကား လထေဲသို့ ငှကျမှေးနှယျ လှငျ့၍သှားသညျ။ ၄ ၊၅မီတာလောကျအထိပြံသနျးပွီးတော့မှ ပွိုငျပှဲကှငျးပွငျသို့ ပွနျလညျသကျဆငျးလာတော့သညျ။
ဂငျြခနျြကအရမျးအားနညျးတာမဟုတျလား….. အခု ဒီအားနညျးတဲ့ခန်ဓာကိုယျလေးက ဒီလောကျအထိလုပျလိုကျနိုငျတယျ…. အလားတူပဲ ပရိတျသတျတှလေညျး အရမျးထိတျလနျ့ကုနျကွရကာ ဂငျြခနျြနှငျ့ပတျသတျသညျ့ထငျမွငျခကျြတှကေိုသာ တဈယောကျတဈပေါကျပေးနကွေတော့တယျ။ စငျပျေါကပုံရိပျတဈခုကိုငေးကွညျ့ရငျး အနာဂတျမှာ ဂငျြခနျြဟာ မညျသို့သောသူဖွဈလာမညျကို မမှနျးဆနိုငျကွတော့ပေ။
ကဒီလြှံနှငျ့ကဒီယနျတို့မှာတော့ အလှနျအရုပျဆျုးနလေပွေီ။ ရလဒျကဒီလိုဖွဈလာမညျသို့ မှနျးခဲ့သညျမဟုတျ။
“ဟမျ့။ ခငျြးယနျ ရှငျးတနျ မငျးကအားနညျးနညျးတော့ရှိသားပဲ” အသံခပျတိုးတိုးဖွငျ့ကဒီယနျကပွောသညျ။
ကဒီလြှံခကျခကျခဲခဲမတျတပျပွနျရပျကာ ဂငျြခနျြအားသတျဖွတျတော့မလို ကွညျ့နပွေနျသညျ။
ကဒီလြှံကယျြလောငျစှာမာနျသှငျးလိုကျလြှငျ သူတျောစငျအဆငျ့၉စှမျးအားတှကေ သူ့လကျဝါးနှဈဖကျမှာစုဝေးလာသညျ။ သူ ဂငျြခနျြ့ဆီလငျြမွနျစှာပွေးသှားကာ လကျနှဈဖကျလုံးဖွငျ့ ဂငျြခနျြ့ရငျဘတျအား အားကုနျရိုကျခလြိုကျသညျ။
ဂငျြခနျြ့မကျြနှာမှာတော့ လှောငျပွောငျနဟေနျကထငျးနဆေဲ။ သူသညျလညျး သူ့သူတျောစငျစှမျးအားတှကေို လကျနှဈဖကျမှာ စုစညျးကာ ကဒီလြှံ့လကျတှနှေငျ့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျလိုကျသညျ။
လကျတှဆေုံမိသညျ့အခိုကျအသံအကယျြကွီးထှကျပျေါလာသညျ။တဖနျပွနျပွောငျးကာ တဈယောကျရငျဘကျတဈယောကျရိုကျမိကွရာ နှဈယောကျလုံးနောကျဆုတျလိုကျ၇သညျ။
ဂငျြခနျြကား ရပျတနျ့မညျ့ဟနျမရှိပွီ။ သူ့ခွထေောကျအားကြှမျးကငျြစှာသုံးပွီး တိုကျခိုကျဖို့ရာပွငျလိုကျပွနျသညျ။ ဂငျြခနျြခကျြခငျြးမွပေျေါလှဲခကြာ ခွထေောကျတှကေတော့ ကဒီလြှံအားထိထိမိမိကနျထုတျလိုကျသညျ။
ကဒီလြှံအကနျမခံရခငျက ထိုကနျခကျြအားသိလိုကျပမေယျ့ ရှောငျဖို့ရနျကားမဖွဈပွီ။ ကဒီလြှံ သူ့ဗိုကျအကနျခံရပွီး နောကျတဈကွိမျလထေဲသို့ ပြံတကျသှားရပွနျသညျ။
သူ့ပစ်မှတ်ကိုထုနှက်ဖို့အတွက် အရမ်းကိုကပ်လွန်းနေသည်ကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါ သူနောင်တသေးသေးလေးရလိုက်သည်။ သို့ပေမယ့် သူချက်ချင်းပဲကျောဘက်ကိုသွားလိုက်ပြီး ဂျင်ခန့်ကိုကန်လိုက်သည်။
လျှပ်တပြက်အချိန်မှာပဲ ဂျင်ချန်ဘာမှပြန်မလုပ်ဘဲ ၁၀ကွက်အကြောပေးခြင်းဟာ ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ လှုပ်ရှုားမှုတိုင်းကို ကဒီလျှံဟာအရှောင်ပဲခံနေရလေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအတွက်မှာတော့ ဂျင်ချန်ဟာ သူ့အရေပြားနှင့်ထိခါနီးမှသာ ရှောင်တိမ်းသည်ကိုတွေ့၇ပေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကြည့်နေကြရင်း သူတို့တွေမှာ ချွေးစေးတွေပင်ပျံလို့ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ချင်းယန်ဟူ… သူ့မှာ ဂျင်ချန့်အတွက် ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေရတယ်။
ကဒိလျှံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေက အတော်မြန်ပေမယ့် ၁၀ကြိမ်လုံးမှာ သူဂျင်ချန်ရဲ့ အင်္ကျီလေးကိုတောင်ထိအောင်မတိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကဒီလျှံမယုံကြည်နိုင်နေသလို ဒေါသကြောင့်မျက်နှာတွေပါ နီမြန်းလာလေတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကဒီလျှံရဲ့လက်သီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ဂျင်ချန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
“၁၀ကြိမ်ပြီးသွားပြီ။ အခု ငါ့အလည့်ပဲ”
သူ့ခြေထောက်မှာသုံးထားသည့်အမြန်နှုန်းမှာ အလွန်ကိုပြင်းလှသည်မို့ ကဒီလျှံမှာရှောင်ဖို့အခွင့်အရေး မရလိုက်လေဘူး။ သို့ပေမယ့် ကန်ချက်ကိုကာဖို့ သူ့လက်တွေကိုအသုံးပြုလိုက်ပေမယ့် ဂျင်ချန့်ခြေထောက်မှာ လက်တွေကိုဖြတ်၍ ကဒီလျှံရဲ့ရင်ဘတ်ဆီရောက်လာလေတယ်။
ဂျင်ချန်ရဲ့ခြေထောက်က သုံးထားတဲ့အားက ကဒီလျှံကိုနောက်ကိုအရှိန်ဖြင့် အတော်လွင့်သွားစေသည်။ ကဒီလျှံမှာ ဂျင်ချန်ကို မယုံနိုင်စွာသာ ရပ်ကြည့်နေဖြစ်သည်။ ဂျင်ချန်က သူတော်စင်အဆင့်၈ပဲရှိသေးတာတောင်မှ သူ့ခွန်အားက မျှော်လင့်ထားတာထက် အတော့်ကိုများနေသေးတယ်။ အဲ့ဒိခွန်အားကို ကဒီလျှံတောင်မှ တောင့်ခံဖို့ရာမဖြစ်နိုင်လေဘူး။
နောက်ဆုံးသူတို့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့စဉ်က ကဒီလျှံအတွက် ဂျင်ချန့်ကိုပြန်တိုက်ဖို့ အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူး။ ထို့ကြောင့် သူ ဂျင်ချန့်ခွန်အားအစစ်အမှန်ကို နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ယခုတိုက်ပွဲမှသာ ဂျင်ချန်ဟာ သူ့ထက်ခွန်အားအရာမှာ များစွာသာသည့်အကြောင်း နားလည်လိုက်ရလေတယ်။
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ဂျင်ချန်က ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မြန်အဆုံးသတ်ချင်နေပုံပါပဲ။ သူက ကဒီလျှံကိုခုခံဖို့ရာအချိန်မပေးတော့ဘဲ လက်ဝါးတစ်ချက်ဟာ ကဒီလျှံ့ရင်ဘတ်ဆီရောက်လာပြန်တယ်။
ကဒီလျှံမတ်မတ်ရပ်နိုင်ဖို့မနည်းကြိုးစားလိုက်ရသည်။ သူ့မျက်နှာကား အတော်အရုပ်ဆိုးနေလေပြီ။ ဂျင်ချန့်ခေါင်းကိုရွယ်ထားတဲ့လက်သီးဟာ ဂျင်ချန်ရဲ့လက်သီးကိုကာကွယ်ရင်းသာ အသုံးပြုလိုက်ရလေတယ်။
ဂျင်ချန်တစ်ချက်ရယ်လိုက်ပြီး ကဒီလျှံကိုပခုံးမှကိုင်ကာ ဆွဲယူလိုက်တယ်။ထိုသူ့ခန္ဓာအား နောက်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ထပ်ကိုင်ကာ အားနည်းနည်းထည့်ပြီး အဝေးကို ပျံသန်းစေလိုက်သည်။
သူ့အရင်ဘ၀မှာတုန်းကဖြင့် မွန်ဂိုတွေထံမှာ ပညာသင်ခဲ့ဖူးပါ၏။ သို့ပေကြောင့်လည်း နပန်းသတ်ခြင်းလိုပညာရပ်မျိုးတွင် သူအတော် တော်ပါ၏။ သူအကြိမ်များစွာလေ့ကျင့်ခဲ့သည်မို့ အတွေ့အကြုံတွေမှာလည်း အတော်ပင်များလေသည်။
အကြောင်းတွေက သူ့မှတ်ဥာဏ်မှာချိုးကပ်နေပြီဆိုပေမယ့် သူကားဓားရေးပြရုံသက်သက်ထက် များစွာအသုံးဝင်သည့် တိုက်ခိုက်ရေးပညာရေးတွေကိုလည်း လေ့လာထားခဲ့သည်။ သူ့အနေနှင့် တစ်စုံတစ်ခုကိုမမှတ်မိလျှင်တောင်မှ အခြားတစ်ခုကိုတော့ဖြင့် သူ့မှတ်ဥာဏ်ကညှစ်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်တည့်..
ကဒီလျှံ၏ခန္ဓာမူကား လေထဲသို့ ငှက်မွှေးနှယ် လွင့်၍သွားသည်။ ၄ ၊၅မီတာလောက်အထိပျံသန်းပြီးတော့မှ ပြိုင်ပွဲကွင်းပြင်သို့ ပြန်လည်သက်ဆင်းလာတော့သည်။
ဂျင်ချန်ကအရမ်းအားနည်းတာမဟုတ်လား….. အခု ဒီအားနည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးက ဒီလောက်အထိလုပ်လိုက်နိုင်တယ်…. အလားတူပဲ ပရိတ်သတ်တွေလည်း အရမ်းထိတ်လန့်ကုန်ကြရကာ ဂျင်ချန်နှင့်ပတ်သတ်သည့်ထင်မြင်ချက်တွေကိုသာ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပေးနေကြတော့တယ်။ စင်ပေါ်ကပုံရိပ်တစ်ခုကိုငေးကြည့်ရင်း အနာဂတ်မှာ ဂျင်ချန်ဟာ မည်သို့သောသူဖြစ်လာမည်ကို မမှန်းဆနိုင်ကြတော့ပေ။
ကဒီလျှံနှင့်ကဒီယန်တို့မှာတော့ အလွန်အရုပ်ဆ်ုးနေလေပြီ။ ရလဒ်ကဒီလိုဖြစ်လာမည်သို့ မှန်းခဲ့သည်မဟုတ်။
“ဟမ့်။ ချင်းယန် ရှင်းတန် မင်းကအားနည်းနည်းတော့ရှိသားပဲ” အသံခပ်တိုးတိုးဖြင့်ကဒီယန်ကပြောသည်။
ကဒီလျှံခက်ခက်ခဲခဲမတ်တပ်ပြန်ရပ်ကာ ဂျင်ချန်အားသတ်ဖြတ်တော့မလို ကြည့်နေပြန်သည်။
ကဒီလျှံကျယ်လောင်စွာမာန်သွင်းလိုက်လျှင် သူတော်စင်အဆင့်၉စွမ်းအားတွေက သူ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်မှာစုဝေးလာသည်။ သူ ဂျင်ချန့်ဆီလျင်မြန်စွာပြေးသွားကာ လက်နှစ်ဖက်လုံးဖြင့် ဂျင်ချန့်ရင်ဘတ်အား အားကုန်ရိုက်ချလိုက်သည်။
ဂျင်ချန့်မျက်နှာမှာတော့ လှောင်ပြောင်နေဟန်ကထင်းနေဆဲ။ သူသည်လည်း သူ့သူတော်စင်စွမ်းအားတွေကို လက်နှစ်ဖက်မှာ စုစည်းကာ ကဒီလျှံ့လက်တွေနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်သည်။
လက်တွေဆုံမိသည့်အခိုက်အသံအကျယ်ကြီးထွက်ပေါ်လာသည်။တဖန်ပြန်ပြောင်းကာ တစ်ယောက်ရင်ဘက်တစ်ယောက်ရိုက်မိကြရာ နှစ်ယောက်လုံးနောက်ဆုတ်လိုက်၇သည်။
ဂျင်ချန်ကား ရပ်တန့်မည့်ဟန်မရှိပြီ။ သူ့ခြေထောက်အားကျွမ်းကျင်စွာသုံးပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ရာပြင်လိုက်ပြန်သည်။ ဂျင်ချန်ချက်ချင်းမြေပေါ်လှဲချကာ ခြေထောက်တွေကတော့ ကဒီလျှံအားထိထိမိမိကန်ထုတ်လိုက်သည်။
ကဒီလျှံအကန်မခံရခင်က ထိုကန်ချက်အားသိလိုက်ပေမယ့် ရှောင်ဖို့ရန်ကားမဖြစ်ပြီ။ ကဒီလျှံ သူ့ဗိုက်အကန်ခံရပြီး နောက်တစ်ကြိမ်လေထဲသို့ ပျံတက်သွားရပြန်သည်။